For those who don&#39;t know which path to choose
Homeဆောင်းပါးများFor those who don't know which path to choose
For those who don't know which path to choose
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတဲ့ လမ်းပျောက်လူငယ်များအတွက်
”အစ်ကိုရေ..တကယ်ကို ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတာပါ။ အရင်အလုပ်တွေမှာလည်း ၂ နှစ် စီလောက် လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပါသလို ဖြစ်လာတော့ ထွက်ပြီး နောက်အလုပ်ပြောင်းတယ်။ ခဏပဲ ခံတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဒီအလုပ်ကလည်း ကိုယ့်အတွက် မဟုတ်သလို ခံစားလာရပြန်ရော။ အခု အစ်ကို့စာတွေ ဖတ်မိတော့ ကိုယ်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားတာကို လုပ်ဖို့တော့ စိတ်ကူးရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိကပြသနာက ကိုယ်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားတာက ဘာမှန်းကို မသိတော့တာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာလုပ်ချင်နေမှန်း/ဘာဖြစ်ချင်နေမှန်းကို မသိတော့တာပါ။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါဦး အစ်ကို။“
ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ စကားသံတွေပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ရုတ်တရက် ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့က လူငယ်တွေကို “ကိုယ်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားတာကို လုပ်ဖို့” စာတွေရေးပြီး အကြံပေးကြတယ်။ လူငယ်တချို့ ဖတ်မိပြီး အဲ့ဒီအကြံကို လိုက်နာဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ လိုက်နာဖို့မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာလုပ်ချင်နေမှန်း/ ဘာဖြစ်ချင်နေမှန်းကို မသိတော့တာနဲ့တင် တစ်,နေပြန်ရော။ ဒါ တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးနော်။ အတော်များများပဲ။ ၃ ပုံ တစ်ပုံ မဟုတ်ရင် တစ်ဝက်လောက်တောင် ရှိမလားပဲ။
သူတို့ အဲလို ကျွန်တော့်ကို မေးလာတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ငယ်ငယ်က တက်ကျမ်းတွေ စ,ဖတ်တုန်းက အချိန်ကို ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ ဟုတ် ပ။ ကျွန်တော်တို့လည်း အဲလိုတွေ ခံစားခဲ့ရတာပဲ။ အခုမှသာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ တိတိကျကျသိပြီး လုပ်နေ၊ အကောင်အထည်ဖော်နေရင်း လမ်းခုလတ်မှာ ပျော်နေတာ။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဘာလုပ်ရမှန်း ကိုယ်လည်း ရုတ်တရက် မသိခဲ့တာပဲ။
ဖုန်းဆက်လာတဲ့ လူငယ်လေးကို မိနစ် ၂၀ လောက် သေချာ အမေးအဖြေလုပ်ပြီး စကားပြောပေးလိုက်မိတယ်။ လုပ်လို့ ရနိုင်တာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောပြပေးတာပေါ့။ သူကလည်း ဒါတော့လုပ်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ဘာကြောင့်? ဘယ်လို? ဒါတော့ လုပ်မကြည့်ရသေးဘူး။ လုပ်ကြည့်ပါမယ် စသဖြင့် ပြန်ဆွေးနွေးတာပေါ့။ နောက်တော့ သူ လိုချင်တာ အတိုင်းအတာတစ်ခု ရသွားလို့လား? ကျွန်တော့်ကိုပဲ အားနာလို့လားမသိ ကျွန်တော် အကြံပေးတာတွေ လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ့မယ်လို့ ပြောပြီး ဖုန်းချသွားတယ်။
သူကသာ ဖုန်းချသွားတာ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ဖုန်းက ကျ,မသွားဘူး။ သူ့ကိုပြောလိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စကားတွေ/ ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ အကြံတွေကို ကျွန်တော် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်သုံးသပ်နေမိတယ်။ ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာတွေထဲက ဟာတွေ/ ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံတွေကိုပဲ သူ့ကို နိုင်သလောက် လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော် နားလည်သလို၊ လက်ခံထားသလို သူ့ကို ပြန်ပြောပြပေးရတာပေါ့။ သူ့ကို ကျွန်တော် ရှင်းပြ၊ ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်း စဉ်းစားနေရင်းနဲ့မှ တော်တော်လေး ထိရောက်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်မိတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ရှင်းပြရမယ့် ပုံစံလေးတစ်ခု ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲကို ရောက်လာတယ်။
ထူးခြားတာက ဒီအတွေးနဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံလေးက ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာတွေထဲက ပုံစံမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော် ခေါင်းထဲ လင်းကနဲဖြစ်ပြီး အတော်လေးပျော်သွားမိတယ်။
C, Am, F, G ထဲက ပထမဆုံး ခွဲထွက်လိုက်နိုင်တဲ့ ဂီတသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ပီတိမျိုးပေါ့… 🙂
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရှာတွေ့လိုက်တဲ့ နည်းစနစ်လေးတစ်ခု လူငယ်တွေအတွက် ပေးလိုက်နိုင်တော့မှာပါလားလို့ တွေးမိရင်းပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဒီဆောင်းပါးလေး ခင်ဗျားတို့ရှေ့ ရောက်လာတော့တာပါပဲဗျာ။
စကားအပြန်အလှန်ပြောဟန်လေးနဲ့ ပြန်ရေးပြရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ ဒီဟန်ကိုပဲ သုံးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဝါသနာကို ဘယ်လိုရှာရမှာ
”ဒီလို စဉ်းစားကြည့်ကွာ ညီရာ… ညီ အခုလောလောဆယ် ကိုယ်တကယ်လုပ်ချင်တာ၊ ဖြစ်ချင်တာ ဘာလဲဆိုတာ မသိရင် ညီ ဘာဝါသနာပါလဲ? ဒါမှမဟုတ် ကိုယ် ဘာကိုစိတ်ဝင်စားသလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါလား?“
”အဲဒီ ဘာဝါသနာပါလဲဆိုတာကို စဉ်းစားလို့မရတာ အစ်ကို။ ကျွန်တော်ထင်တာ ကျွန်တော်က ဘာမှဝါသနာမပါသလိုပဲ။ ဒီလိုပဲ သူများတွေလုပ်တဲ့ ကောင်းမယ်ထင်တာလေးတွေ လိုက်လုပ်ကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကြာလာတော့ ပျင်းလာပြီး မလုပ်ချင်လို့ ရပ်ပစ်လိုက်မိတာပဲ။“
”အင်.. ဒါမှ ပြဿနာပဲ။ အင်းလေ ဒါမျိုးဖြစ်နေတာ ညီ တစ်ယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူငယ်အတော်များများ အစ်ကို တွေ့ဖူးပါတယ်။ အစ်ကိုတို့တုန်းကတော့ ကံကောင်းခဲ့တယ်ကွ။ ကိုယ် လုပ်ချင်တာ၊ ကိုယ် ဖြစ်ချင်တာ ဘာလဲဆိုတာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိခဲ့တယ်။ အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အဲဒီဟာကို ချက်ချင်းရွေးချယ်ပြီး မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘဲ ပိုပြီးဖြစ်သင့်မယ်ထင်တာ တစ်ခုကို ရွေးချယ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်မှာ ကိုယ် လုပ်ချင်တာ၊ ကိုယ် ဖြစ်ချင်တာတွေကို ဖြစ်ခွင့်ရတော့မယ်လို့ ယုံကြည်မှု ထားပြီးတော့ လေ့လာစရာရှိတာတော့ လေ့လာနေခဲ့မိတယ်။
အရမ်းပင်ပန်းလို့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို တွဲပြီးတောင် မလေ့လာနိုင်တော့တဲ့ အခါမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် စိတ်က အဲဒီလုပ်ချင်၊ ဖြစ်ချင်တာကို စိတ်ကူးညွတ်နေ၊ မြင်နေခဲ့မိတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ အချိန်တန်တော့ ကိုယ်လုပ်သင့်တယ်ထင်ပေမယ့် မလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို လုပ်စရာမလိုတော့ဘဲ ကိုယ် လုပ်ချင်တာတွေကိုပဲ အဓိက လုပ်နိုင်တဲ့ နေရာ… ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးအရာတွေကို ရွေးလုပ်နိုင်တဲ့ နေရာကို ရောက်လာခဲ့တာပဲ။
”အစ်ကိုကတော့ ဟုတ်တာပေါ့ အစ်ကို။ အစ်ကို လုပ်ချင်တာ၊ ဖြစ်ချင်တာက အစ်ကို့စိတ်ထဲမှာ ပြင်းပြင်းပြပြ ရှိနေတာကိုး။ ကျွန်တော့်လို ဘာမှစိတ်ထဲမှာရှိမနေဘဲ ယောင်လည်လည် ဖြစ်နေတာမျိုးကျတော့ ဘယ်လိုလုပ်မတုန်း“
”အဲဒီမှာ ညီ့ကို အစ်ကို တစ်ခု သတိပေးချင်တာ ရှိတယ် ။ ညီ့စိတ်ကို ညီ သေချာပြန်ကြည့်ဖို့ပါ။ ညီ လုပ်ချင်၊ ဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာကိုတကယ်ပဲ ရှာလို့မတွေ့တာလား? ဒါမှမဟုတ် ညီ လုပ်ချင်၊ ဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာက လက်ရှိအခြေအနေမှာ ညီနဲ့ အလှမ်းဝေးလွန်းနေလို့ အဲဒါကို မလုပ်ချင်၊ မဖြစ်ချင်တော့ဘူးလို့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကို ထင်လာအောင် လှည့်စားလိုက်မိတာလား ဆိုတာပေါ့။ အစ်ကိုတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာတွေရှိလို့ ပြောတာပါ။
တခါတလေမှာ ဖြစ်တတ်တာက… အရာတစ်ခုကို အစ်ကိုတို့ လိုချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မရနိုင်လောက်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ရနိုင်အောင် လုပ်ရမယ့်ဟာတွေ၊ ပေးဆပ်ရမယ့်ဟာတွေကို ရှောင်ရှားချင်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဒီအရာကို မလိုချင်ပါဘူး၊ မလုပ်ချင်ပါဘူးလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖြေတွေး တွေးတတ်လာတယ်။ ကြာတော့ အဲဒီဖြေတွေးတွေက ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း စွဲထင်သွားပြီး တကယ်ပဲ အဲ့လို ယုံကြည်မိလာတယ်။
အစ်ကိုပြောတာ ညီ သဘောပေါက်ရဲ့လား မသိဘူး။ အလွယ်ပြောရရင်တော့ မစားရတဲ့ စပျစ်သီးကို ချဉ်တယ်လို့ တွေးပါများရင်း စပျစ်သီးဟာ ချဉ်ပါတယ်ကွာလို့ တကယ်ပဲ စိတ်ထဲမှာ ယုံသွားတာ။
ညီ့စိတ်ထဲမှာ အဲ့လိုဖြစ်နေမှာ စိုးတယ်။ ညီ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေချာ စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ပါဦး။ မျက်စိမှိတ်လိုက်၊ အသက်ကို ဝ,အောင်ရှူ၊ ပြီးရင် ဖြည်းဖြည်းချင်း စဉ်းစားကြည့်။ ညီ့ရင်ထဲမှာ အဲ့လိုအရာမျိုးတွေများ ရှိနေလား..?
စိတ်ကို မြင်အောင်သေချာကြည့် ညီ။ စိတ်ဟာ နဂိုက မူရင်းအချက်အလက်ထက်စာရင် စိတ်ထဲမှာ တွေးတာ၊ ကြာတာကို ယုံသွားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကို မြင်အောင် သေချာကြည့်။“
အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်နေရင်းနဲ့ အချိန်ကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်း မသိလိုက်တာမျိုး၊
လုပ်နေရင်းနဲ့ ဘာငွေကြေး၊ အကျိုးအမြတ်မှ မရနေဘူးဆိုရင်တောင် လုပ်ရတာကို ပျော်နေတာမျိုး၊
မလုပ်ခင်၊ လုပ်ဆဲ၊ လုပ်ပြီးချိန်မှာတောင် ဒီအလုပ်အကြောင်း တွေးပြီး ပျော်နေတာမျိုး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်နေတာမျိုး ဒါမျိုးရှိသလား? ဒါတွေဟာ ညီ့ဝါသနာ၊ ညီလုပ်ချင်၊ ဖြစ်ချင်တာတွေပဲ ညီ။
ညီငယ်ဟာ ကျွန်တော်ပြောသလို မျက်လုံးကိုမှိတ်၊ အသက်ကို မှန်မှန်ရှူရင်း ခဏကြာအောင် စဉ်းစားပါတယ်။ သူ့ကို ဒီအချိန်မှာ အာရုံပျံ့လွင့်မှာစိုးလို့ စကားတွေ ထပ်ပြောမနေဘဲ ဒီအတိုင်းပဲ ကျွန်တော် စောင့်ကြည့်နေပေးလိုက်တယ်။ ခဏကြာတော့ သူလည်း မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လာပြီး ကျွန်တော့်ကို စကားပြန်စ,ပြောတော့တယ်။
”အစ်ကို ပြောသလို စဉ်းစားကြည့်တော့ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲကို ဝင်လာတာ တချို့တော့ ရှိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် လုပ်ချင်တဲ့၊ လုပ်ရရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ ထင်တာလေးတွေပေါ့။ ဒီလို ခဏလေးစဉ်းစားတာတောင် နည်းနည်းပေါ်လာရင် အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားရင်တော့ ပိုပေါ်လာမှာပေါ့နော် အစ်ကို။“
”အင်း ဟုတ်တာပေါ့ ညီရ။ ညီ အခု အစ်ကို့ဆီက ပြန်သွားပြီးရင် အိမ်မှာလည်း အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ယူပြီး ပြန်စဉ်းစားဦး။ ဘာလို့ဆို ဒီအဆင့်က အရေးကြီးတယ်။ ကိုယ် တကယ်ဘာလိုချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမှ ရှေ့ဆက် လုပ်စရာရှိတာတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဆက်လုပ်လို့ရမှာ။ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ ဖြည့်ဆည်းဖို့ လိုတယ်။ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ တွေ့လာရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်း ကျော်လွှားနိုင်မယ် စသဖြင့်ပေါ့“
”ဟုတ် အစ်ကို။ ကျွန်တော် သေချာပြန်စဉ်းစားမယ်။ ပြီးရင် အစ်ကိုနဲ့ ပြန်လာတိုင်ပင်မယ်နော် အစ်ကို။“
”အေးပါ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစ်ကို အခုကတည်းကကြိုပြီး တစ်ခုတော့ ပြောထားချင်တယ်။ အစ်ကိုဟာ ညီ့ကို ဖြစ်တန်ချေတွေ၊ ဖြစ်နိုင်ချေတွေကို အကြံပေးနေတာ သက်သက်ပဲ။ ညီ့အစား ဘာမှ ဝင်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူးနော်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ညီ့ဘဝ အနာဂတ်အတွက် ဆုံးဖြတ်သူဟာ ညီကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ရမယ်။ မိဘ၊ ဆွေမျိုး၊ ဆရာသမားတွေကစ,လို့ သူငယ်ချင်းအဆုံး ဘယ်သူမှ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ညီကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါလေးတော့ ခေါင်းထဲမှာ သေချာလေး ထည့်ထား။
မိဘ၊ ဆရာသမားတွေဆီက အကြံဉာဏ်တောင်းရမယ်။ သူတို့က ကိုယ့်ထက် ပညာဉာဏ် ဒါမှမဟုတ် ဘဝအတွေ့အကြုံ ပိုပြီးရှိတာကိုး။ သူတို့ဆီက အမြင်တွေကို ယူသင့်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ သေသေချာချာ ဆုံးဖြတ်ရမှာပဲ။ အစ်ကို့ကိုလည်း အားမကိုးနဲ့။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး အားမကိုးလိုက်နဲ့။ ကိုယ့်ဘဝအခြေအနေကို ကိုယ်ပဲ ရင်ဆိုင်ဖန်တီးရမှာ။ တခြားလူတွေကလည်း သူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ ရှိနေကြမှာ။ အဲဒါလေးတော့ ခေါင်းထဲ ထည့်ထား ညီ။“
”ဟုတ် အစ်ကို၊ ကျွန်တော် ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်။“
“ဟ ငါ့ညီ၊ စေတနာနဲ့ တစ်ခု ထပ်ပြောလိုက်ဦးမယ်။ မင်း အဲ့လေသံကို ပြင်ဦးဟ။ ကြိုးစားကြည့်ပါမယ် မဟုတ်ဘူး ။ ”ကြိုးစားမယ်” ဒါပဲ။ ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်ဆိုတဲ့လေသံက ပျော့နေတယ်။ စမ်းလုပ်ကြည့်မယ်။ မရရင် ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး လက်လျှော့လိုက်မယ် ဆိုတာမျိုး လေသံ ပေါက်နေတယ်။ ဒီအတိုင်း အလကားနီးပါးရနေတဲ့ လေတောင် ပျော့နေရင် တကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါ အခက်အခဲအဟန့်အတားတွေနဲ့ တကယ်နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကြုံလာရင် မင်းဘယ်လို လုပ်မလဲ? လေသံကို မာထားလိုက်…ကျွန်တော် ကြိုးစားမယ်။ ဒါပဲ။“
ညီငယ်တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို မျက်လုံးပြူးကြည့်ရင်း ရယ်ပါတယ်။
”ဟား ဟား ဟား…အင်းပါ အစ်ကိုရာ။ ကျွန်တော် အစ်ကို ပြောဖူးတာကို မေ့သွားလို့ပါ။ အိုကေ။ ကျွန်တော်ပြန်ပြင် လိုက်မယ်။ ကျွန်တော် ကြိုးစားမယ် အစ်ကို။ ဒါပဲ။ ကျွန်တော် မရ,ရအောင်ကြိုးစားမယ်။“
”အေး၊ အဲ့လိုလုပ်စမ်းပါဟ ငါ့ညီရ“
ကျွန်တော်လည်း သူ့စကားကို အားရဝမ်းသာ ထောက်ခံအားပေးလိုက်မိပါတယ်။ သူ့မျက်လုံးတွေမှာလည်း မျှော်လင့်ချက်အရောင်တချို့ တွေ့နေမိတယ်။ သူ့အတွက် တစ်ခုခု ပေးနိုင်လိုက်ပြီလို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်လည်း ကျေနပ်နေမိတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာရာ၊ ပျော်ရာကို လုပ်နေရမှ ဘဝမှာ ရှင်သန်ရတာ အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ ခံစားနေရမြဲ မဟုတ်လားဗျာ။
Ko Zin Zay (activeenglish) ဆရာဇင်ဇေလွင် ဆောင်းပါးများ
San Zuren December 16, 2021 at 12:14 AM
“ငါတို့ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုရှိရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်”…
မတူညီတဲ့ရေစက်လေးတွေ စုပေါင်းပီး လှပတဲ့ ပင်လယ်ကြီးတည်ဆောက်ကြရအောင်"
Unknown December 31, 2021 at 6:21 AM
Unknown January 21, 2022 at 12:33 AM
bobo February 25, 2022 at 6:42 AM
Sammi December 16, 2021 at 1:21 AM
လမ်း​ရော အနာဂတ်​ရော ​ပျောက်
ပန်းတိုင်က​တော့ "အ​ရေး​တော်ပုံ မြန်မြန် ​အောင်ဖို့" ပါ
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 5:27 AM
Sammi December 30, 2021 at 7:12 PM
ဖိုက်တင်းးး အတူတူ ​ရှေ့ဆက်ကြမယ်
၂၀၂၂ ရဲ့ အလင်းရောင်ခြည်တွေဟာ
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 31, 2021 at 3:33 AM
Unknown January 21, 2022 at 12:34 AM
Unknown January 21, 2022 at 1:16 AM
dawsawhla February 25, 2022 at 7:05 AM
Yamin December 16, 2021 at 10:40 PM
M December 30, 2021 at 10:14 PM
Mon mon December 16, 2021 at 11:52 PM
Dar Dar December 17, 2021 at 8:54 AM
Thanks January 20, 2022 at 11:44 PM
Myat December 17, 2021 at 4:56 PM
Kan December 17, 2021 at 8:37 PM
Kaung Khant December 17, 2021 at 9:40 PM
Zin Mar Htwe December 17, 2021 at 10:46 PM
Thazinmoe December 17, 2021 at 10:52 PM
Aye Thandar Soe December 18, 2021 at 5:45 PM
ညီညွတ်ချင်းရဲ့ ရလဒ် အကြောက်တရား ကိုရိုက် ချိုး အမြစ်ပါလှနိ မယ့်နောကိ ဆုံး ပွဲ
မကြာခင် အောင်ပွဲကို အတူတူ ဆင်နွှဲ ရအောင်
Every time click
PDF များ ဘေးကင်းပါစေ
Mon mon December 19, 2021 at 12:58 AM
Aye Kay December 19, 2021 at 6:56 PM
I am also lost. This article gives me encouragement
Su Su December 20, 2021 at 6:49 PM
Che December 24, 2021 at 7:10 AM
Lin Noom December 26, 2021 at 12:56 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 5:32 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 22, 2022 at 3:13 AM
Wow wow, calm down guy...
Clickerအချင်းချင်း အဆိုးမြင်စိတ်လေးနည်နည်းလျှော့ပါဗျ၊ ၁၀စက္ကန့် စောင့်ရတဲ့အချိန် မန့်တာ ဘာဖြစ်သလဲဗျ၊ မကလစ်ပဲနေရင် ဒီlinkထဲမှာ ကျနော့်ကို ခင်ဗျားမြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ သေချာတာက ခင်ဗျားထက် ပိုကြိုးစားclickနေတဲ့သူဆိုတာပဲ။
Unknown December 30, 2021 at 6:19 PM
ျမန္မာ ျပည္သူ ျပည္သား အားလုံးေဘးကင္းၾကပါေစ
May Htoo Sein December 30, 2021 at 6:51 PM
hwo December 30, 2021 at 6:55 PM
Unknown December 30, 2021 at 7:00 PM
Unknown December 30, 2021 at 7:26 PM
Unknown December 30, 2021 at 7:33 PM
Unknown December 30, 2021 at 7:35 PM
Than Than December 30, 2021 at 7:36 PM
Unknown December 30, 2021 at 7:36 PM
NAK December 30, 2021 at 7:55 PM
Unknown December 30, 2021 at 8:04 PM
Unknown December 30, 2021 at 8:06 PM
zaylatt December 30, 2021 at 8:07 PM
Unknown December 30, 2021 at 8:14 PM
Kyaw mae yaung December 30, 2021 at 8:23 PM
Mc December 30, 2021 at 8:28 PM
ဂျူနီယာ မင်းမင်း December 30, 2021 at 8:30 PM
Myate December 30, 2021 at 9:01 PM
Unknown December 30, 2021 at 9:07 PM
Unknown December 30, 2021 at 9:08 PM
A good post 💙
Nyi Nyi December 30, 2021 at 9:09 PM
Unknown December 30, 2021 at 9:15 PM
Khine Moe December 30, 2021 at 9:15 PM
Sammi December 30, 2021 at 9:22 PM
4653 1681 4224 7379(Ooredoo)
Ei Zar Phyu December 30, 2021 at 9:23 PM
လမ်းမပျောက်ပါ ကိုယ်သွားရမယ့်လမ်းကိုအထင်းသားမြင်နေရပါပီ ဘာအခက်ခဲရှိရှိ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရင် မဝေးတော့တဲ့ပန်းတိုင်ကို ကျိန်းသေရောက်မှာပါ
Unknown December 30, 2021 at 9:27 PM
Ishida December 30, 2021 at 9:27 PM
Hla Hla Nue December 30, 2021 at 9:39 PM
BoTun December 30, 2021 at 9:42 PM
nyi hmue thwin December 30, 2021 at 9:46 PM
Phue December 30, 2021 at 9:57 PM
Nguwar December 30, 2021 at 9:57 PM
rain December 30, 2021 at 10:10 PM
M December 30, 2021 at 10:12 PM
Have to complete our mission✨
Unknown December 30, 2021 at 10:22 PM
ဆု December 30, 2021 at 10:30 PM
VPN မချိန်းပဲ location ပဲ ချိန်းရင်ရလားရှင့်
vpn နဲ့ ခုမှ သုံးကြည်တာ ကောင်းတယ်
khin Nwe December 30, 2021 at 10:36 PM
Capt Ye Thu December 30, 2021 at 10:59 PM
Unknown December 30, 2021 at 11:07 PM
phoophoo December 30, 2021 at 11:08 PM
Ma Phyu December 30, 2021 at 11:13 PM
Unknown December 31, 2021 at 12:15 AM
Unknown December 31, 2021 at 12:29 AM
Unknown December 31, 2021 at 12:37 AM
ရွှေမန်း December 31, 2021 at 1:02 AM
Nway Oo Mhan December 31, 2021 at 1:10 AM
Unknown December 31, 2021 at 1:27 AM
KG December 31, 2021 at 2:17 AM
Unknown December 31, 2021 at 2:23 AM
Ye Min Naing December 31, 2021 at 2:24 AM
Unknown December 31, 2021 at 2:31 AM
MML December 31, 2021 at 2:32 AM
Hlwan Nway Oo December 31, 2021 at 2:48 AM
moonlamin December 31, 2021 at 2:58 AM
Greeting to 2021 and welcome to 2022.
In the new year, I pray that all the wishes of the people will be fulfilled.
Peace be upon Myanmar.
Military dictator fail.
We must win the uprising, we must win.
Mo Kham Kham(zar chi) December 31, 2021 at 4:07 AM
Unknown December 31, 2021 at 4:38 AM
KyiPyarHtun December 31, 2021 at 4:47 AM
Unknown December 31, 2021 at 5:09 AM
Unknown December 31, 2021 at 5:18 AM
ZawZawHtet December 31, 2021 at 5:33 AM
Unknown December 31, 2021 at 5:43 AM
Unknown December 31, 2021 at 6:10 AM
Good December 31, 2021 at 6:10 AM
လမ်းမပြောက်ပါဘူးဗျ နွားတစ်အုပ်က ရှေ့က
ကာဆီး ကာဆီး လုပ်နေလို့ပါ
HS December 31, 2021 at 6:19 AM
Thu Ra Soe December 31, 2021 at 6:43 AM
Khine Moe December 31, 2021 at 6:58 AM
Unknown December 31, 2021 at 7:09 AM
We must win 💪💪💪
Unknown December 31, 2021 at 7:20 AM
Nway Oo Maung December 31, 2021 at 7:22 AM
Unknown December 31, 2021 at 7:32 AM
Nway Oo Yaung Ni December 31, 2021 at 7:55 AM
hotspot နဲ့ Click မယ်
New Year party ပေးသလို linkတွေ အမုန်းဆွဲ clickကြစို့
Unknown December 31, 2021 at 8:04 AM
TT December 31, 2021 at 8:05 AM
Ni Ni Phoenix December 31, 2021 at 8:05 AM
Happy new year.Good bye 2021. I hope allthe best vome to myanmar in 2022.
Phyuthan December 31, 2021 at 9:06 AM
Unknown December 31, 2021 at 7:39 PM
Thandar Myint Aung December 31, 2021 at 9:04 PM
Apt January 2, 2022 at 6:30 AM
Unknown January 2, 2022 at 8:07 AM
phoophoo January 2, 2022 at 8:08 AM
Unknown January 2, 2022 at 8:11 AM
Unknown January 13, 2022 at 9:22 AM
မ အ လ ရေဘောဘဲဟ
Zin Ko Lwin January 14, 2022 at 1:06 AM
နံနံပင်အရမ်းကြိုက်တယ် January 20, 2022 at 8:14 PM
Yaminn Paing January 20, 2022 at 8:22 PM
Thurein January 20, 2022 at 8:25 PM
clickတစ်ချက်စီ တစ်ချက်စီတိုင်း ခွေးတွေ အသက်ထွက်ဖို့ အထောက်အပံ့ ြဖစ်ပါစေဗျာ
TT January 20, 2022 at 8:36 PM
အခုချိန် ဘာရည်မှန်းချက်မှမထားနိူင်​သေးပါ ​
ခွေးသားမင်း​အောင်လှိုင်နဲ့​နောက်လိုက်​ခွေး​တွေနှိမ်နင်းပြီးမှ မ​အေလိုး​​ခွေးသားမင်း​အောင်လှိုင်​သေမှ အလုပ်ရှာမယ်
Unknown January 20, 2022 at 8:36 PM
စိတ်ကူးလက်တွေ့ လုပ်မရတာတွေ ရှိနေတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမလည်း လမ်းပျောက်ရတယ်
ယူနီကုဒ္မရေတာ့ စာဖတ္လို႔မရ ေေေေေေေေေ
Unknown January 20, 2022 at 8:42 PM
Thin Zar Aung January 20, 2022 at 8:57 PM
ဆရာဇင်ဇေ စာတွေက တကယ် ဖတ်ရတာ တန်ဖိုးရှိပြီး အားတက်ရပါတယ်🌿
Back kham January 20, 2022 at 9:02 PM
Su Khit January 20, 2022 at 9:53 PM
Unknown January 20, 2022 at 10:23 PM
Unknown January 20, 2022 at 10:28 PM
နေမင်း January 20, 2022 at 10:30 PM
Unknown January 20, 2022 at 10:58 PM
Zaw Htwe January 20, 2022 at 11:04 PM
K2 January 20, 2022 at 11:06 PM
I lit this.
Unknown January 20, 2022 at 11:09 PM
Unknown January 20, 2022 at 11:50 PM
Unknown January 21, 2022 at 12:11 AM
Unknown January 21, 2022 at 12:15 AM
DecemberP January 21, 2022 at 12:23 AM
Heingyi January 21, 2022 at 12:29 AM
Unknown January 21, 2022 at 12:36 AM
စခအ,​တွေ အကုန် အမြန် ကျဆုံးကြပါ​စေ။
Aung Myint Than January 21, 2022 at 12:46 AM
နိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အနာဂါတ်လှပရေး စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ဖြတ်ပေးရမည်။
Unknown January 21, 2022 at 1:35 AM
We suppot NUG
Unknown January 21, 2022 at 1:38 AM
kono dio da January 21, 2022 at 1:46 AM
KG January 21, 2022 at 2:47 AM
Fighting all clickers.💪🏾👍👌
Unknown January 21, 2022 at 3:34 AM
Hla Hla Nue January 21, 2022 at 3:49 AM
sweswe January 21, 2022 at 3:53 AM
Unknown January 21, 2022 at 4:14 AM
Zin January 21, 2022 at 4:15 AM
Unknown January 21, 2022 at 4:47 AM
Nway Oo Mhan January 21, 2022 at 5:22 AM
Unknown January 21, 2022 at 6:30 AM
8:00PM က စပြီး သံပုံးတွေတီးခဲ့ကြတယ်
ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ် အခုက တော်လှန်ရမဲ့အချိန်အဲ့အတွက် လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ 8:00 PM တိုင်းအိမ်ထဲကနေတော်လှန်ကြမယ်
Unknown January 21, 2022 at 7:27 AM
Fighting Fighting Fighting❣️💪✅
W W Lwin January 21, 2022 at 7:32 AM
တို့အားလုံးရဲ့ လက်‌တွေ များများ clickကြစို့
Unknown January 21, 2022 at 7:43 AM
Mai Kyi Nwe January 21, 2022 at 7:41 PM
လောလောဆယ်တော့ ဘာပန်းတိုင်မှကို မရှိဘူးရှင့် တခုတော့ စဲဲမြဲထားတာရှိတယ် အဲ့ဒါ ကတော့ မအလ ကို ကြိုးစင် ရအောင်တင်ဖို့ပဲ
ACpower January 21, 2022 at 8:33 PM
Hla Hla Nue January 21, 2022 at 8:58 PM
Unknown January 21, 2022 at 10:32 PM
Shwe Nyaung January 21, 2022 at 11:38 PM
မင်းတို့.ဘယ်လောက်ယုတ်မာကောက်ကျစ်နိူင်မှာလဲစစ်ခွေးအမျိုးယုတ်တွေရာ...မင်းတို့အဘ မင်းအောင်လှိိူင် နဲ့ နောက်လိုက်စစ်ခွေးတွေ..ငရဲကိုမကြာခင်သွားကြတော့မှာပါ..
Unknown January 22, 2022 at 5:35 AM
Unknown January 23, 2022 at 1:44 AM
Unknown January 23, 2022 at 10:01 PM
Fighting all my lovely clickers
မအလ အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကစပီး ပန်းတိုင်ပျောက်ရုံတင်မဟုတ်ဘူး အလုပ်ပါ ပျောက်သွားတယ်
အလုပ်ပိုင်ရှင် တရုတ်က အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကစပီး
မတော် မတရား ခိုင်းလို့ မကျေနပ်လို့ ထွက်လိုက်ရတယ်
Min Min January 24, 2022 at 11:14 AM
sorry to hear that and hope everything's okay with u. Be strong and never give up WE ARE CLICKERS!!!
梅干 February 18, 2022 at 7:06 AM
Click2Donate February 25, 2022 at 6:22 AM
NIGMMNT February 25, 2022 at 6:48 AM
MyoOo February 25, 2022 at 5:09 PM
December ❄️❄️❄️ February 25, 2022 at 10:22 PM
Chu Zim February 26, 2022 at 9:54 PM
Saw War Say February 26, 2022 at 10:12 PM
Thet Oo February 26, 2022 at 10:20 PM
Unknown February 26, 2022 at 10:54 PM
Thein Soe February 26, 2022 at 10:55 PM
Unknown February 26, 2022 at 11:10 PM
Nyi Myo February 26, 2022 at 11:24 PM
Unknown February 26, 2022 at 11:53 PM
Thikehtun February 27, 2022 at 12:15 AM
YanNyaing February 27, 2022 at 12:22 AM
Unknown February 27, 2022 at 2:30 AM
အခုလိုအချိန်မှာ ဘာလုပ်မလဲ? ဆိုတာ သေသေချာချာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
Unknown February 27, 2022 at 2:57 AM
ကလေးတို့ရေ click နေတယ်နော် fighting ပါနော်
Unknown February 27, 2022 at 3:19 AM
shwe February 27, 2022 at 3:25 AM
shwe February 27, 2022 at 3:26 AM
shwe February 27, 2022 at 3:51 AM
ok click now yet😀😀😀
Unknown February 27, 2022 at 3:54 AM
Unknown February 27, 2022 at 3:55 AM
Su linn Myat February 27, 2022 at 3:59 AM
ကိုမောင် February 27, 2022 at 4:09 AM
Unknown February 27, 2022 at 5:08 AM
Unknown February 27, 2022 at 5:35 AM
ကိုလေး February 27, 2022 at 5:35 AM